Imandarmedia.com: ११ डिआइजीलाई एआइजी बनाउने निर्णयपछि गृहमन्त्री शर्मालाई लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप !
Main News, Newspaper » ११ डिआइजीलाई एआइजी बनाउने निर्णयपछि गृहमन्त्री शर्मालाई लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप !
११ डिआइजीलाई एआइजी बनाउने निर्णयपछि गृहमन्त्री शर्मालाई लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप !
सरकारले प्रहरी नियमावलीविपरीत अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी बढाएको छ ।
संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्न एआइजीको दरबन्दी थप गरिँदा नियम मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ राख्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।